ယခုအခါ ATTO XstreamCORE® 7550 နှင့် 7600 သည် VMware Ready Certified ဖြစ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ATTO XstreamCORE® 7550 နှင့် 7600 အခုတော့ VMware ကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားလက်မှတ်ရရှိပါသလား
ATTO XstreamCORE® 7550 နှင့် 7600 အခုတော့ VMware ကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားလက်မှတ်ရရှိပါသလား
အခါသိုလှောင်မှုဆက်သွယ်မှုတစ်ခုထုတ်လုပ်သူဖြစ်ခြင်းမှကြွလာ, ATTO နည်းပညာ, Inc မှ အမြဲစီမံခန့်ခွဲ, ပိုကောင်းတဲ့စတိုးဆိုင်မှအမြင့်ဆုံးအဆုံးမှအဆုံးသို့ဖြေရှင်းချက်နှင့်ထုတ်ကုန်အပ်လျက်, ဒေတာကယ်နှုတ်တော်မူခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအကျိုးရှိစွာကွန်ယက်နှင့်ဒေတာသိုလှောင်မှုဆက်သွယ်မှုပို့, 1988 ကတည်းကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆိုပါအိုင်တီဖြတ်ပြီးခေါင်းဆောင်နှင့်မီဒီယာ & ဖျော်ဖြေရေးစျေးကွက်အဖြစ်စိုးစံလေ၏သိရသည်။ ဒါဟာအများဆုံးဒေတာ-intensive ကွန်ပျူတာပတ်ဝန်းကျင်မှာများအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများဖြေရှင်းချက်ပေး၏တိုတောင်းသောပြိုလဲဘယ်တော့မှသိရသည်။ အခုတော့သူ့ရဲ့လတ်တလောအတူ VMware ကကြေငြာချက်ဒါကြောင့်တစ်ဦးထက်ပိုကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောမှုနှုန်းမှာအချက်အလက်အသစ်ကိုသိုလှောင်မှုကန့်သတ်ချိုးဖျက်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်အရာကို VMware ကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား™အခြေအနေ ATTO သည်အဓိပ္ပာယ်
အဆိုပါကြေငြာချက်သော ATTO XstreamCORE® FC အသင်းအဆုံးအဖြတ်, AMHERST, နယူးယော့, တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 26th မှ လာ. 7550 နှင့် 7600 အရှိန် protocol ကိုတံတားများအောင်မြင်ခဲ့သည် VMware ကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား™ status ကို။ အဆိုပါ VMware ကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံ၏ VMware ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦး Co-အမှတ်တံဆိပ်အကျိုးကျေးဇူးအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ် နည်းပညာမဟာမိတ်အဖွဲ့ Partner (TAP) အစီအစဉ်။ ATTO ဖောက်သည်ကိုအလွယ်တကူ VMware မိုဃ်းတိမ်သည်အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အသိအမှတ်ပြုမိတ်ဖက်ထုတ်ကုန်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအစီအစဉ်ကိုထားရှိခြင်းသည်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဖောက်သည်များစီမံကိန်း၏အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ထုံးစံ-built ဖြေရှင်းချက်ကျော်ကုန်ကျငွေစုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဤထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုအသုံးပြုရန်အဘို့ဤခွင့်ပြုပါတယ်။
ATTO XstreamCORE FC အသင်း 7550 နှင့် 7600
အဆိုပါ ATTO XstreamCORE FC အသင်း 7550 နှင့် 7600 protocol ကိုတံတားများ၏အရွယ်မှာဖိုင်ဘာလိုင်းကိုသိုလှောင်မှုသို့တည်ဆဲတိုက်ရိုက်-ပူးတွဲ SAS သိုလှောင်မှုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ကြသည်အရှိန်ကြောင့်, အိုင်တီတာမြန်ခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်မှာတစ်ဦးက high-performance ကိုသိုလှောငျဧရိယာနက်ဝပ် (SAN) ဒီဇိုင်းစီမံအုပ်ချုပ်ဘို့, ဒီခွင့်ပြု သာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် 64 အထိတိုက်ရိုက်-ပူးတွဲ SAS သိုလှောင်မှုချိတ်ဆက်ပြီးပြည့်စုံနိုင်သည့် -effective စံ။ အညီအမျှင်း၏ထုတ်ကုန်များနည်းပညာဆိုင်ရာထိရောက်မှုမြှင့်တင်ရန် ATTO များအတွက်တိုးတက်သောနည်းလမ်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ် VMware ကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား™ status ကိုထားရှိခြင်း, သာ. ကြီးမြတ်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုရရှိအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအောင်မြင်။
အဆိုပါ XstreamCORE, စျေးကွက်၏ ATTO နည်းပညာအကြီးတန်းဒါရိုက်တာ၏ရှုထောင့်ကိုချိုးဖောက်သည့်ကန့်သတ်သို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းမစူးစမျး တွမ် Kolniak သူကဖော်ပြထားသည့်အခါပိုကောင်းကဆိုသည်နိုင်ဘူး "ဒါဟာချဲ့ထွင်ဘို့အဘယ်သူမျှမလက်တွေ့ကျတဲ့ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူတစ်အိုင်တီထောင့်သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆေးထိုးခြင်းလွယ်ကူခြင်းနှင့်များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်တစ်ဦး forklift အဆင့်မြှင့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းထွက်ဖြစ်၏။ " တွမ်လည်းဆိုသွား "XstreamCORE သည်ဤအခြေအနေများတွင်လက်တွေ့ဖြေရှင်းနည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဓါးဆာဗာများပေါ်တွင်တည်ဆောက် server ကိုဗိသုကာရုံ XstreamCORE ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏မွေးရာပါသိုလှောင်မှုန့်အသတ်ထဲကနေအခမဲ့ကိုချိုးဖျက်နိုင်ပါ။ "
ဘေးဖယ် ATTO နည်းပညာ ATTO XstreamCORE FC အသင်း 7550 နှင့် 7600 ကနေ ATTO လည်းကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်:
host က Adapter က
Network မှ Adapter က
Storage နဲ့ controller
Thunderbolt ™ Adapter က
ATTO နည်းပညာမြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ်သို့ပေါ်ထွက်လာကတည်းကသုံးဆယ်နှစ်များတွင်၎င်း၏ဆောင်ပုဒ် Fiber Channel ကို, SAS, SATA, iSCSI, ပါဝင်သည်သောနောက်ထပ်အားလုံးသိုလှောင်မှု interfaces မှအဆင့်မြင့်ဆက်သွယ်မှု၎င်း၏ပေးပို့သရုပ်ပြအတွက် "ဟုအဆိုပါသိုလှောင်နောက်ကွယ်မှာကို The Power" ခဲ့ Ethernet, NVMe နှင့် Thunderbolt ။ အခုတော့ XstreamCORE FC အသင်း 7550 နှင့် 7600 VMware ကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား™ status ကိုအောင်မြင်ပြီ, ကဆက်ဆက်ကြောင်းဆောင်ပုဒ်ဖြင့်အသက်ရှင်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် ATTO နည်းပညာ, Inc မှ အဘယ်မှာထို့နောက်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိရန် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အဆိုပါသွားရောက်ကြည့်ရှုရန် VMware ကဖြေရှင်းချက်ချိန်း (VSX), VMware ကမိတ်ဖက်များနှင့် developer များကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ကြွယ်ဝသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာနှင့်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ software ကိုထုတ်ဝေနိုင်မည့်အွန်လိုင်းဈေး။
ATTO ATTO နည်းပညာ ATTO XstreamCORE® FC အသင်း ATTO XstreamCORE® FC အသင်း 7550 နှင့် 7600 FOR-တစ်ဦးက FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, protocol ကိုတံတားများ လှံ & Arrows သိုလှောင်ခြင်း နည်းပညာမဟာမိတ်အဖွဲ့ Partner (TAP) အစီအစဉ် မူကွဲစနစ်များ 2019-08-27
ယခင်: RT ကို Software ကိုမြန်, ယုံကြည်စိတ်ချဂရစ်ဖစ်ပလေးအောက်အဘို့အ Aja I / O Solutions အပေါ် Standardizes
နောက်တစ်ခု: IBC2019 မှာ IP ကိုကျော် Apantac ဟန်ပြ KVM